Cudur Daar Buqaqable.net oo Maalmahan Hawada Cilad Farsamo Uga Maqneyd Ayaa idiin Balan Qaadeysa in Ay Howsheedii Dib u Bilaabeyso | buqaqable.net
Jabuuti: Magdhow ayaan siineynaa DP World July 17, 2018
Shirkadda laga leeyahay dalka Jabuuti ee maamusha Dekadda Doraleh ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin inay magdhow ka bixiyaan heshiiskii ay ka baxeen ee u dhexeeyay iyaga iyo Shirkadda Dubai Ports World ee laga leeyahay Imaaraadka.
Galka Baarista: Kulamadii baaqday ee baarlamanka Somalia July 17, 2018
Dowladda oo ka warbixisay shirka Brussels July 17, 2018
Danjiraha Soomaaliya u jooga xaruunta Midawga Yurub ee Brussels oo uu ka dhacay shirka, ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha, nabadgaliyada iyo taageerada beesha caalamka.
Somaliland: Kama qeyb galin shirka Brussels July 17, 2018
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in aanay ka qaybgalin, isla markaana aanay jirin cid xukuumadda metelaysa oo ka qaybgashay shirka Soomaaliya ee dalka Belgium-ka.
Putin: "Wax sir ah kama hayo Trump" July 17, 2018
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa beeniyey inuu wax akhbaaraad ah oo dhaawici kara ka hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Ururka ONLF ayaa bayaan uu soo saaray kaga hadlay dagaallo khasaare badan geystay oo qeybo ka mid ah Itoobiya ku dhexmaray maleeshiyo ka tirsan qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee daga Itoobiya.
Baarlamanka Masar oo ansxiiyay xeerar cusub July 17, 2018
Baarlamaanka dalka Masar ayaa Isniinti shalay ansixiyay dhowr qodob oo sharci ah oo uu ku jiro xeer u ogolaanaya dadka ajnabiga ah in ay heli karaan jinsiyadda Masar haddii ay dhigtaan bankiyada dalkaasi lacag dhan $400,000 afar boqol oo kun oo dollar.
Soo dhaweyn qaran oo loo sameeyay xidigaha Faransiiska July 17, 2018
Boqollaal kun oo ruux ayaa shalay galab kusoo dhaweeyay magaalada Paris ciyaartooyda iyo macalimiinta xulka kubadda cakta Faransiiska, kadib marki ay kasoo laabteen dalka Russia oo ay Axadii kusoo qaadeen Koobka Aduunka ee sannadkaan 2018-ka.
Shirka Soomaaliya ee Brussels oo furmay July 16, 2018
Magaalada Brusells ee dalka Belgium-ka waxa amaanta ka furmay shrikii iskaahsiga beesha caalamka iyo Soomaaliya oo looga hadlayo kaalmada bani’aadminnimo, horumarinta dhaqaalaha iyo arrrimaha amniga.
Saraakiil ka tirsan NISA oo xilka laga qaaday July 16, 2018
Qoraal ka soo baxay agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa shaqada lagaga joojiyey laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay’adda NISA.
Somalia: Xisbiyo qoraal u diray shirka Brussels July 16, 2018
Eritrea oo dib u furtay safaaradeedii Ethiopia July 16, 2018
Eritrea ayaa dib u furtay safaaraddeedii Ethiopia. Dib u furista safaaradda ee maanta ayaa timid toddobaad kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen inay soo afjareen labataan sano oo is-marin waa milatari uu ka taagnaa xudduudda, kaasi oo kumanaan qof ay ku dhinteen.
Cudur Daar Buqaqable.net oo Maalmahan Hawada Cilad Farsamo Uga Maqneyd Ayaa idiin Balan Qaadeysa in Ay Howsheedii Dib u Bilaabeyso
« Britain appoints first Somalia ambassador in 21 years Banaan Baxyo Ay Soo Qaban Qaabiyeen Al-Qaacida ayaa Maanta Laga dhigay Magaalooyinka Marka iyo Afgooye »
Faysal C. waraabe oo sheegay inay Farmaajo siiyeen "aragti odaynimo" July 18, 2018
Faysal Cali Waraabe wuxuu sheegay in ka qayb galkooda shirkii Brussels uu ahaa inay u ololeeyaan mowqifka jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland, wixii magaca Soomaaliya lagu bixinayana ay si toos ah qaybtooda uga helaan.
Sir Cliff Richard oo BBC dacwad kaga guulaystay July 18, 2018
Sir cliff Richard ayaa BBC kaga guulaystay dacwad la xiriirta gaar ahaanshihiisa, kiis ku lug leh sida ay BBC u tebisay mar ay boolisku u dheceen gurigiisa. Maxkamadda sare ayaa xukuntay in BBC ay fanaanka siiso 210,000 oo Gini.
Trump ayaa codsaday in sariir weyn loogu rakibo diyaaradda cusub ee Air Force One July 18, 2018
Dalka Hindiya waxaa laga hirgaliyay adeeg taleefoonka ah oo ay ku wada xiriiri karaan dad baahiyaha gaarka ah qaba July 18, 2018
Wariyaha BBC-da Ayeshea Perera ayaa la kulantay dadka ka dambeeyay barnaamijkan taleefoonka ku jira.
Nin ku nool Maraykanka ayaa dadaalkiisa ku muteystay abaalmarin gaari ah July 18, 2018
Ninkan oo lagu magacaabo Walter Carr ayaa habeenkii oo dhan soo lugeynayay, si subixii xigay uu uga gaaro xilliga shaqada oo ku tiilay gobolka Alabama ee dalka Maraykanka.
Haweenay badhyo kuuskuusan raadinaysay oo dhimatay July 18, 2018
Dakhtar Bumbum oo reer Brazil ah oo ku caan baxay qaliinno uu ku qurxiyo dadka caanka baxay ayaa la la'yahay ka dib markii ay dhimatay haweenay uuu irbad ku duray si ay badhyuhu ugu waawaynaadaan.
Duulimaadyadii Itoobiya iyo Eritrea oo maanta dib u billaabanaya July 18, 2018
Maanta waxa dib u bilaamaya isku socodkii duulimaadyada diyaaradihii u kala gooshi jiray magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara.
Midoowga Yurub oo ka carro-gedisanaya la ganacsiga Maraykanka July 18, 2018
Heshiiskan oo la sheegay in uu yahay kan ugu weyn adduunka, ayaa waxaa uu quseeyaa dad gaaraya illaa 600 milyan oo qof.
Trump oo ka noqday hadal uu hore u yidhi July 17, 2018
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu aqbalayo xaqiiqada baadhitaanka laamaha sirdoonka Maraykanku ku sheegeen in Ruushku farogeliyey doorashadii Maraykanka ee 2016-kii, taas oo ah mid burinaysa hadalladii uu ka yidhi shirmadaxeedkii uu la yeeshay Vladimir Putin Isniintii.
Iran oo ku hanjabtay in ay tayayn doonto Uranium-keeda July 17, 2018
Iran ayaa sheegtay in ay isku diyaarinayso in ay dardar geliso barnaamijkeeda tayaynta Uranium-ka hadii uu fashilmo heshiiskii ay la gashay quwadaha dunida.
Wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha July 18, 2018
Laacibkii hore ee Manchester United, Wayne Rooney, oo dhawaan ka tegay kooxda Everton ayaa sheegay inuu go'aankaasi qaatay maadaama aanu dooneyn inuu waqtigiisa ku lumiyo kursiga keyka.